Qaylo-dhaanta cilladda iyo xalka guddiga koronto-dhaliyaha koronto dhaliyaha
Awoodda tamarta naaftada genset ma bilaabi karto oo si otomaatig ah uma joojin karto Falanqaynta Guuldarada 1. Mashiinka Naaftada ah waa la xiraa iyada oo aan wax tallaabo ah la qaadin. Solenoid 2.diesel engine waa jabay. Cilad-bixinta 〈1〉 Ku cabiray gudbinta mashiinka Diesel oo leh mitir-mitir badan, korantada shaqada ee caadiga ah waa 25.5 V, haddii gudbinta aan lahayn acti ...
Falanqaynta fashilka iyo xalka haddii qiiqa qiiqa mishiinka naaftada aan caadi ahayn
Hawlgalka caadiga ah ee mishiinka naaftada leh culeyska, midabka qiiqa qiiqa waa cawl khafiif ah caadi ahaan, marka rarku xoogaa culus yahay, waxaa laga yaabaa inuu noqdo cirro madow. Halkan midabka qiiqa qiiqa oo aan caadi ahayn waxaa loola jeedaa qiiqa qiiqa waa madow ama qiiqa qiiqa waa cadaan ama qiiqa qiiqa waa buluug. 1 black Qiiq madow ayaa tilmaamaya duqsiga ...
Falanqaynta fashilka iyo xalka mashiinka dejiyaha koronto dhaliyaha ma bilaabi karo
Waxaa jira sababo kala duwan oo aan loo bilaabi karin mashiinka naaftada genset. Inta badan afarta qodob ee soo socda: 1. bilowga nidaamka Fashilka Falanqaynta A.Start danab batteriga waa hooseeyaa, awoodda dhabta ah kuma filna (waxay muujineysaa danab sida danab dalwaddii) B.Start fiilada batteriga iyo cilad bixinta fiilooyinka mootada.
Waa maxay sababta qiiqa ku jira dejiyaha naaftada?
Noocyada dhaliyaha naaftada ayaa laga yaabaa inay qiiqa sii daayaan inta lagu jiro hawlgalka. Midabada kala duwan ee qiiqu waxay u taagan yihiin cilado kala duwan. Haddii qiiqa koronto-dhaliye naaftada ah aan wax looga qaban waqtigiisa, waxay sababi kartaa fashilaad dejinta koronto-dhaliyaha naaftada ama xitaa fashilka inuu bilaabo. Waa kuwan qaar ka mid ah xaaladda qiiqa ...
1.Unit qabashada In maaraynta waa in fiiro gaar ah loo siiyaa xadhigga waa in lagu xidhaa meesha ugu habboon, si khafiif ah u laalaada. Marka cutubka loo qaado goobta loo socdo, waa in lagu rido bakhaarka intii suurtagal ah. Haddii aysan jirin bakhaar lagu keydiyo hawada furan, t ...
Shirkadeena waxay ku guuleysatay shahaado patent model mucaawinada loogu talagalay ultra - taagan taagan matoor
by admin on 16-03-09
Shirkaddayadu waxay si rasmi ah u heshay shahaado patent nooca adeegga ah ee matoorrada taagan ee aadka u deggan ee la dejiyay bishii Maarso 9, 2016. Qalabka koronto-dhaliyaha ah ee aamusan ayaa dib-u-habeyn ku sameynaya qaab-dhismeedka gudaha ee koronto-dhaliye si cutubku u qabsado meel yar. Waxay ku habboon tahay smal ...
Shirkadeena waxaa lasiiyay shahaado shati shati shatiyeedka utility-ga naaftada ah ee aamusan
by admin on 15-06-17
Shirkadeena ayaa si rasmi ah u heshay shahaado shatiga patent-ka ee matoor naaftada aadka u xasilloon ee la dejiyay Juun 17th, 2015. Genset-ka naaftada ah ee aadka u deggan wuxuu leeyahay qaab dhismeed gudaha ah oo iswaafajsan iyo naqshad adeegsade u habboon, taas oo ku habboon dadka isticmaala inay dayactiraan oo beddelaan xirashada. ..
Qaylo-dhaanta cilladda iyo xalka naaftada ge ...